बजार उपकरणबाट सस्तो बजार अनुसन्धान | Martech Zone
बजार उपकरणहरूबाट सस्तो बजार अनुसन्धान
सोमबार, अक्टोबर 3, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
गत महिना जुमेरंग सामेल भयो Martech Zone हाम्रो टेक्नोलोजी प्रायोजकको रूपमा। हामीले उनीहरूको प्रयोग गरेर धेरै समय बितायौं सजिलो सर्वेक्षण उपकरणहरू र सबै भन्दा बढि सर्वेक्षणहरू र सर्वेक्षणहरू डिजाइन गर्ने तरिका सिक्दछ जुन परिणामहरू उत्पन्न गर्दछ। यो उनीहरूको टोलीका महान मान्छेहरूसँग हाम्रो अन्तर्वार्ता नभएसम्म मात्र हामीले अनुभव गरे कि Zoomerang सर्वेक्षण समाधान भन्दा बढी हो, यद्यपि।
अभिभावक संस्था बजार उपकरणहरू सर्वेक्षणको लागि डिजाइन र पूर्ति सेवा प्रदान गर्दछ। $ १1499 as भन्दा कमको लागि, मार्टेक ब्लग पाठकहरूले मार्केट उपकरण सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। बजार उपकरणसँग २ लाख भन्दा बढी मानिसहरू तयार छन् ... र तपाईं ती दुवैलाई डेमोग्राफिक वा भौगोलिक रूपमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ! त्यो अविश्वसनीय किफायती बजार अनुसन्धान सेवा हो!
B2B सामग्री मार्केटिंग: Eloqua बाट ग्रान्ड गाइड